နှင်းဆီတစ်ခင်း ပန်းတစ်ခြင်း: So this is Christmas (Tag Post)
Thank you, sis, for writing it. I enjoy reading it and smilealot when you are refusing about " special someone." Should I believe that (just kidding :). You are not alone on New Year, you have us, blogger sisters and brothers. Wishing youahappy 2012!
ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့ ရေးသွားတဲ့
မကြီးရေ ပျော်ရွှင်သော ခရစ္စမတ်လေးဖြစ်ပါစေနော်း)
Merry X'mas & Happy New Year ပါ
ခရစ်စမတ် တက်ဂ်ပို့စလေးတွေ ဖတ်ရတာ ပျော်စရာ..။ မတူညီ၊ ကွဲပြားတဲ့ ရေးဟန်လေးတွေက ဖတ်ရတာ အရသာရှိလှတယ်နော်...။
ပျော်ရွှင်ဖွယ် ခရစ်စမတ် ရက်မြတ် ဖြစ်ပါစေလို့....။
ပျော်ရွင်ဖွယ် ခရစ်စမတ်လေး ဖြစ်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုရင်း... Happy New Year ပါ မမရေ..
ပျော်ရွှင်စရာ Christmas လေးဖြစ်ပါစေရှင်..
Merry Christmas ပါသိင်္ဂါ
တို့လည်း ခရစ္စမတ်ဆိုတာ ကိုယ့်ဘာသာနဲ့တော့ မဆိုင်လှပေမဲ့ ခရစ်ယန်တွေနဲ့ နီးနီးစပ်စပ် နေခဲ့ရတော့ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နေတဲ့ ပွဲတစ်ခုလိုဖြစ်နေပါပြီ။
မပြန်ခင် နှင်းတွေကို မြင်ခွင့်ရပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်.
Merry Christmas and Happy New Year ပါ။ နှစ်သစ်မှာ မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ ပြည့်စုံပါစေ ညီမရေ။
အားလပ်ရက်မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ ...
မသိဂါင်္ဆုတောင်းပြည့်ပြီး နှင်းတွေနဲ့ တွေ့ပါစေနော်။
ပျော်ရွှင်သော နှစ်သစ်ပါ မသိဂါင်္း))